04.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“मीठे बच्चे– यो कयामतको समय हो , रावणले सबैलाई कब्रदाखिल बनाइदिएको छ , बाबा आउनु भएको छ अमृत वर्षा गरेर साथमा लिएर जान।”
शिवबाबालाई भोला भण्डारी पनि भनिन्छ, किन?
किनकि शिव भोलानाथ जब आउनु हुन्छ गणिका, अहिल्या, कुब्जाको पनि कल्याण गरेर उनलाई विश्वको मालिक बनाइदिनु हुन्छ। आउनु हुन्छ पनि हेर पतित दुनियाँ, पतित शरीरमा, त्यसैले भोला हुनु भयो नि। भोले बाबाको निर्देशन छ– मीठे बच्चे! अब अमृत पिऊ, विकार रूपी विषलाई छोडिदेऊ।
दूरदेश का रहने वाला......
रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ अर्थात् आत्माहरूले यस शरीरको कान कर्मेन्द्रियद्वारा गीत सुन्यौ। दूर देशका मुसाफिर आउनु हुन्छ, तिमी पनि मुसाफिर हौ नि। जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन्, ती सबै मुसाफिर हुन्। आत्माहरूको कुनै पनि घर छैन। आत्मा छ निराकार। निराकारी दुनियाँमा रहने निराकारी आत्माहरू हुन्। त्यसलाई भनिन्छ निराकारी आत्माहरूको घर, देश वा लोक। यसलाई जीव आत्माहरूको देश भनिन्छ। त्यो हो आत्माहरूको देश। फेरि आत्मा यहाँ आएर शरीरमा जब प्रवेश गर्छ अनि निराकारबाट साकार बन्छ। यस्तो होइन, आत्माको कुनै रूप छैन। रूप पनि अवश्य छ, नाम पनि छ। यति सानोले कति पार्ट खेल्छ शरीरद्वारा। हरेक आत्मामा पार्ट खेल्ने कति रिकर्ड भरिएको छ। रिकर्ड एक पटक भरिन्छ। फेरि जति पटक रिपीट गर, त्यही चल्छ। त्यसैगरी आत्मा पनि यस शरीर भित्र एक रिकर्ड हो, जसमा ८४ जन्महरूको पार्ट भरिएको छ। जसरी बाबा निराकार हुनुहुन्छ, त्यसैगरी आत्मा पनि निराकार छ। कहीं-कहीं शास्त्रहरूमा लेखिदिएका छन्– उहाँ नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ, तर नाम रूपबाट भिन्न कुनै वस्तु हुँदैन। आकाश पनि पोलार हो। नाम त छ नि आकाश। विना नाम कुनै चीज हुँदैन। मनुष्यले भन्छन्– परमपिता परमात्मा। दूर देशमा त सबै आत्माहरू रहन्छन्। यो साकार देश हो, यसमा पनि दुवैको राज्य चल्छ– राम राज्य र रावण राज्य। आधाकल्प हुन्छ राम राज्य, आधाकल्प हुन्छ रावण राज्य। बाबाले कहिल्यै बच्चाहरूको लागि दु:खको राज्य कहाँ बनाउँछन् र। भन्छन्– ईश्वरले नै दु:ख-सुख दिनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनु हुन्छ– मैले कहिल्यै बच्चाहरूलाई दु:ख दिन्न। मेरो नाम नै हो– दु:ख हर्ता सुख कर्ता। यो मनुष्यहरूको भूल हो। ईश्वरले कहिल्यै दु:ख दिनुहुन्न। यस समयमा छ नै दु:खधाम। आधाकल्प रावण राज्यमा दु:ख नै दु:ख मिल्छ। सुख रत्ती पनि छैन। सुखधाममा फेरि दु:ख नै हुँदैन। बाबाले स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ। अहिले तिमी छौ संगममा। यसलाई नयाँ दुनियाँ त कसैले पनि भन्दैन। नयाँ दुनियाँको नाम नै हो सत्ययुग। त्यही फेरि पुरानो हुन्छ, अनि त्यसलाई कलियुग भनिन्छ। नयाँ चीज राम्रो र पुरानो चीज नराम्रो देखिन्छ। त्यसपछि पुरानो चीजलाई समाप्त गरिन्छ। मनुष्यले विषलाई नै सुख सम्झन्छन्। गायन पनि गरिन्छ– अमृत छोडेर विष किन पिउने? त्यस्तै भन्छन्– तेरे भाने सर्वको भला। हजुरले आएर जे गर्नुहुन्छ, त्यसबाट भलो नै हुन्छ। नत्र रावण राज्यमा मनुष्यले नराम्रो काम नै गर्छन्। यो त अब बच्चाहरूलाई थाहा भइसकेको छ– गुरु नानक आएको ५०० वर्ष भयो, फेरि कहिले आउँछन्? भन्छन्– उनको आत्मा त ज्योतिमा विलीन भइसक्यो। आउँछन् फेरि कसरी? तिमीले भन्छौ– आज भन्दा ४५०० वर्षपछि फेरि गुरुनानक आउँछन्। तिम्रो बुद्धिमा सारा विश्वको इतिहास-भूगोल चक्कर लगाइरहन्छ। यस समयमा सबै तमोप्रधान छन्, यसलाई कयामतको समय भनिन्छ। सबै मनुष्य मरे तुल्य छन्। सबैको ज्योति निभ्न लागेको छ। बाबा आउनु हुन्छ– सबैलाई जगाउन। बच्चाहरू जो काम चितामाथि बसेर भस्म भएका छन्, उनीहरूलाई अमृत वर्षाद्वारा जगाएर साथमा लिएर जानुहुन्छ। माया रावणले काम चितामाथि बसाएर मारिदिएको छ। सबै निदाएका छन्। अहिले बाबाले ज्ञान अमृत पिलाउनु हुन्छ। अब ज्ञान अमृत कहाँ र त्यो पानी कहाँ। सिक्खहरूले विशेष दिनमा धेरै धूमधामसँग तलाउलाई सफा गर्छन्, माटो निकाल्छन्। त्यसैले नाम नै राखेका छन्– अमृतसर। अमृतको तलाउ। गुरुनानकले पनि बाबाको महिमा गरेका छन्। स्वयं भन्छन्– एकोअंकार, सत नाम.... उहाँ सदैव सत्य बोल्नेवाला हुनुहुन्छ। सत्य-नारायणको कथा छ नि। मनुष्यले भक्तिमार्गमा कति कथा सुन्दै आएका छन्। अमरकथा, तीजरीको कथा.... भन्छन्– शंकरले पार्वतीलाई कथा सुनाउनु भयो। उनी त सूक्ष्मवतनमा रहन्छन्, त्यहाँ फेरि कथा कुनचाहिँ सुनाउनु भयो? यो सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ– वास्तवमा तिमीलाई अमरकथा सुनाएर अमरलोकमा लैजान म आएको हुँ। मृत्युलोकबाट अमरलोकमा लैजान्छु। बाँकी सूक्ष्मवतनमा पार्वतीले के दोष गरिन् र, जसकारण उनलाई अमर-कथा सुनाइयो? शास्त्रहरूमा त अनेक कथा लेखिदिएका छन्। सत्य नारायणको सत्य कथा त होइन। तिमीले कति सत्य नारायणको कथा सुन्यौ होला! फेरि सत्य नारायण कोही बन्यो र, अझै गिर्दै जान्छन्। अहिले बुझेका छौ– हामी नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्छौं। यो हो अमरलोकमा जानको लागि सच्चा सत्य-नारायणको कथा, तीजरीको कथा। तिमी आत्माहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– तिमी नै सुन्दर पूज्य थियौ फेरि ८४ जन्मपछि तिमी नै पूजारी बनेका छौ। त्यसैले गायन छ– आफैं पूज्य, आफैं पूजारी। बाबा भन्नुहुन्छ– म त सदैव पूज्य हुँ। तिमीलाई आएर पूजारीबाट पूज्य बनाउँछु। यो हो पतित दुनियाँ। सत्ययुगमा हुन्छन् पूज्य पावन मनुष्य, यस समयमा छन् पूजारी पतित मनुष्य। साधु-सन्तले गाइरहन्छन्– पतित-पावन सीताराम। यो शब्द सही छ.... सबै सीता प्रियतमा हुन्। भन्छन्– हे राम आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। सबै भक्तहरूले पुकार्छन्, आत्माले पुकार्छ– हे राम। गान्धीजीले पनि गीता सुनाएर सकेपछि भन्थे– हे पतित-पावन सीताराम। अहिले तिमीले जानेका छौ– गीता कुनै कृष्णले सुनाएका होइनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– विचार लेखाऊ, ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्न। गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ, नकि कृष्ण। पहिला त सोध– गीताको भगवान कसलाई भनिन्छ? भगवान निराकारलाई भनिन्छ वा साकारलाई? कृष्ण त हुन् साकार। शिव हुनुहुन्छ निराकार। उहाँले केवल यस तनलाई लोनमा लिनुहुन्छ। बाँकी माताको गर्भबाट जन्म लिनुहुन्न। शिवको शरीर छैन। यहाँ यस मनुष्य लोकमा स्थूल शरीर छ। बाबा आएर सच्चा सत्य-नारायणको कथा सुनाउनु हुन्छ। बाबाको महिमा हो पतित-पावन, सर्वका सद्गति दाता, सर्वको लिबरेटर, दु:ख हर्ता सुख कर्ता। सुख कहाँ हुन्छ? यहाँ हुन सक्दैन। सुख मिल्छ अर्को जन्ममा, जब पुरानो दुनियाँ खतम भएर स्वर्गको स्थापना हुन्छ। लिबरेट कोहीसँगबाट गर्नुहुन्छ? रावणको दु:खबाट। यो त दु:खधाम हो नि। फेरि गाइड पनि बन्नुहुन्छ। यो शरीर त यहाँ खतम हुन्छ। बाँकी आत्माहरूलाई लैजानु हुन्छ। पहिला प्रियतम फेरि प्रियतमा जान्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ अविनाशी प्यारो प्रियतम। सबैलाई दु:खबाट छुटाएर, पवित्र बनाएर घर लैजानु हुन्छ। विवाह गरेर जब आउँछन् भने पहिला हुन्छन् पति। त्यसपछि पत्नी रहन्छिन्, फेरि बरियाँत हुन्छ। तिम्रो माला पनि यस्तै छ। शिरमा शिवबाबा फूल, त्यसलाई नमस्कार गर्छन्। फेरि युगल दाना ब्रह्मा-सरस्वती। फेरि हौ तिमी, जो बाबाको सहयोगी बन्छौ। फूल शिवबाबाको यादबाट नै सूर्यवंशी, विष्णुको माला बनेका हौ। ब्रह्मा-सरस्वती नै लक्ष्मी-नारायण बन्छन्। लक्ष्मी-नारायण नै ब्रह्मा-सरस्वती बन्छन्। यिनीहरूले मेहनत गरेका हुन्, त्यसैले त पुजिन्छन्। कसैलाई थाहा छैन माला के चीज हो। यत्तिकै माला जपिरहन्छन्। १६१०८ को पनि माला हुन्छ। ठूला-ठूला मन्दिरमा राखिएको हुन्छ फेरि कसैले कहाँबाट कसैले कहाँबाट जप्छन्। बाबा बम्बईमा लक्ष्मी-नारायणको मन्दिरमा जाने गर्थे, गएर माला जप्थे, राम-राम जप्थे किनकि फूल एउटै बाबा हुनुहुन्छ नि। फूललाई नै राम-राम भन्छन्। फेरि सारा मालालाई ढोग्छन्। ज्ञान केही पनि हुँदैन। पादरीले पनि हातमा माला जपिरहन्छन्। सोध– कसको माला जप्नु भएको हो? उनलाई त थाहा छैन। भनिदिन्छन् क्राइस्टको यादमा जप्छौं। क्राइस्टको आत्मा कहाँ छ? यो उनीहरूलाई थाहा छैन। तिमीले जानेका छौ– क्राइस्टको आत्मा अहिले तमोप्रधान छ। तिमी पनि तमोप्रधान, भिखारी थियौ। अब भिखारीबाट राजकुमार बन्छौ। विश्व सम्पन्न थियो, अहिले भिखारी बनेको छ, फेरि सम्पन्न बन्छ। बनाउनेवाला हुनुहुन्छ बाबा। तिमी मनुष्यबाट राजकुमार बन्छौ। एउटा प्रिन्स कलेज पनि थियो, जहाँ राजकुमार-राजकुमारी गएर पढ्थे।
यहाँ पढेर तिमी २१ जन्मको लागि स्वर्गमा राजकुमार-राजकुमारी बन्छौ। यी श्रीकृष्ण राजकुमार हुन् नि। उनका ८४ जन्मको कथा लेखिएको छ। मनुष्यले के जानून्। यो कुरा केवल तिमीले जानेका छौ। भगवानुवाच, उहाँ सबैका पिता हुनुहुन्छ। तिमीले परमपिताका कुरा सुन्छौ, जसले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ नै सचखण्ड। यो हो झुटखण्ड। सचखण्ड त बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। झुटखण्ड रावणले स्थापना गर्छ। रावणको रूप बनाउँछन्, अर्थ केही जानेका छैनन्, कसैलाई पनि थाहा छैन– आखिर रावण को हो, जसलाई मार्छन्, फेरि जिउँदो हुन्छ। वास्तवमा ५ विकार स्त्रीको, ५ विकार पुरुषको... यसलाई भनिन्छ– रावण। उसलाई मार्छन्। रावणलाई मारेर फेरि सुन लुट्छन्।
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– यो हो काँडाको जंगल। मुम्बईमा बबुलनाथको पनि मन्दिर छ। बाबा आएर काँडालाई फूल बनाउनु हुन्छ। सबैले एक-अर्कालाई काँडा लगाउँछन् अर्थात् काम कटारी चलाइरहन्छन्, त्यसैले यसलाई काँडाको जंगल भनिन्छ। सत्ययुगलाई गार्डेन अफ अल्लाह भनिन्छ, उनै फूलहरू काँडा बन्छन् फेरि काँडाबाट फूल बन्छन्। अहिले तिमीले ५ विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। यस रावण राज्यको विनाश त हुनु नै छ। आखिर भीषण लडाई पनि हुन्छ। सच्चा-सच्चा विजया दशमी पनि हुनु छ। रावण राज्य नै समाप्त हुन्छ फेरि तिमीले लंका लुट्छौ। तिमीलाई सुनका महल मिल्छन्। अब तिमीले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेर स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाबाले सारा विश्वको राज्य-भाग्य दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई शिव भोला भण्डारी भनिन्छ। गणिका, अहिल्या, कुब्जा... सबैलाई बाबाले विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। कति भोला हुनुहुन्छ। आउनु पनि हुन्छ पतित दुनियाँमा, पतित शरीरमा। बाँकी जो स्वर्गका लायक छैनन्, उनीहरूले विष पिउन छोड्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! अब यो अन्तिम जन्म पावन बन। यो विकारले तिमीलाई आदि-मध्य-अन्त्य दु:खी बनाउँछ। के तिमीले यस एक जन्मको लागि विष पिउन छोड्न सक्दैनौ? मैले तिमीलाई अमृत पिलाएर अमर बनाउँछु फेरि पनि तिमी पवित्र बन्दैनौ? विष विना, सिगरेट, रक्सी विना रहन सक्दैनौ? म बेहदको बाबाले तिमीलाई भन्छु– प्यारा बच्चाहरू! यस एक जन्मको लागि पावन बन्यौ भने तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। पुरानो दुनियाँको विनाश र नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नु– यो बाबाको नै काम हो। बाबा आउनु भएको छ सारा दुनियाँलाई दु:खबाट मुक्त गरेर सुखधाम, शान्तिधाममा लैजान। अब सबै धर्म विनाश हुन्छन्। एक आदि सनातन देवी-देवता धर्मको फेरि स्थापना हुन्छ। ग्रंथमा पनि परमपिता परमात्मालाई अकालमूर्त भन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ महाकाल, कालहरूको काल। त्यो कालले त एक-दुई जनालाई लैजान्छ। मैले त सबै आत्माहरूलाई लिएर जान्छु त्यसैले महाकाल भन्छन्। बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई कति समझदार बनाउनु हुन्छ। अच्छा!
१) यस अन्तिम जन्ममा विषलाई त्यागेर अमृत पिउनु र पिलाउनु छ। पावन बन्नु छ। काँडालाई फूल बनाउने सेवा गर्नु छ।
२) विष्णुको गलाको मालाको दाना बन्नको लागि बाबाको यादमा रहनु छ, पूरा-पूरा सहयोगी बनेर बाबा समान दु:ख हर्ता बन्नु छ।
ड्रामाको कवचलाई सामुन्ने राखेर खुसीको खुराक खाने सदा शक्तिशाली भव
खुसी रूपी भोजनले आत्मालाई शक्तिशाली बनाइदिन्छ। भनाइ पनि छ– खुसी जस्तो खुराक छैन। यसको लागि ड्रामाको कवचलाई राम्रोसँग कार्यमा लगाऊ। यदि सधैं ड्रामाको स्मृति रह्यो भने कहिल्यै पनि निराश हुँदैनौ, खुसी कम हुन सक्दैन किनकि यो ड्रामा कल्याणकारी छ। अकल्याणकारी दृश्यमा पनि कल्याण लुकेको छ, यस्तो सम्झेर सधैं खुसी रहने गर।
परचिन्तन र परदर्शनको धूलोबाट टाढा रहनेवाला नै सच्चा अमूल्य हीरा हो।